Nutridieta: websaịtị nke nri gị ka ị ghara ibu ibu | Nutri Nri | Nutri Nri
Nutridieta: weebụsaịtị gị iji mee ka ị ghara ibu ibu
Nutridieta na-bụ website pụrụ iche na nri iji nyere gị aka ịkwụsị ibu. Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara mgbakwunye mgbakwunye nri kachasị mkpa, yana akụnụba ha na uru maka ahụike gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmara usoro nri kacha dị mfe iji felata, echefula isiokwu anyị.
Usoro nri kachasị dị irè
Ọ bụrụ na anyị ebido ileba anya, enwere nri na-adịghị agwụ agwụ dị anyị n’aka. Mana na Nutridieta anyị wetara gị nke kacha mma nri iji belata ibu ma jigide ibu gị. Atụmatụ dị mfe iji tinye n'ọrụ, na-enweghị agụụ na ndụmọdụ kachasị mma ka ị nwee ike ịnọgide na-ebu ibu gị.
Ọ bụ ya mere na weebụsaịtị anyị ị ga-ahụ nri ndị a kacha mara amara ma n’otu oge ahụ, nke kachasị dị mma ma dị nchebe. Naanị ndị na-emesi anyị obi ike na ọ ga-arụpụta ezigbo ihe na nke na-etinyeghị ahụike anyị n'ihe egwu. Will ga - achọpụta na obere mkpali, ị ga - ahụ ụzọ ahụ iji kpochapụ kilogram gị, yabụ ebe a ị ga - anọrịrị na aka dị mma. Ebe ọ bụ na ị ga-ahụ menu nke kwesịrị maka usoro egwu gị kwa ụbọchị na nri kachasị mma, nke kachasị baa ọgaranya ma dị mfe iji kwadebe.
Obere kalori nke calorie 900
Kpofuo ibu site n'iri osikapa
Nri nduku na-atọ ụtọ
Ọgwụ mgbochi mkpali
Otu esi eme ka metabolism
Nri calorie 400
Nri calorie 1500
You chọrọ ịchọpụta nri ndị ọzọ?
Jide n'aka na ị ga-aga na ngalaba nri anyị ebe ị ga-ahụ otu nke kachasị mma maka mkpa gị.
Nri kachasị mma
Oge ụfọdụ, ọ na-esitụrụ anyị ike ma a gwa anyị Mmezu nri ifelata. Mana site ugbu a gawa, anyị ga-agbanwe echiche anyị gbasara ha. Maka na Nutridieta anyị na-egosi gị otu esi eji ụfọdụ nri ndị bụ isi yana mgbakwunye ndị ọzọ ị nwere ike nweta nsonaazụ ịchọrọ mgbe niile.
Oge ụfọdụ, anyị nwere nri agbakwunye n’aka anyị mana anyị amaghị otu esi eji ha. Ngwaahịa eke na ị nwere ike iji obi ike zuru oke nwee mmetụta na ịdị mma karịa. Na weebụsaịtị anyị ị nwere ike ịhụ ihe atụ niile na nkọwa doro anya anyị na-egosi gị gbasara ha. Ga-ewepụ egwu nke mgbakwunye!
Site na esi ya ruo na poached: ụzọ kachasị mma isi rie akwa
Anyị na-agwa gị ihe edamame bụ, njirimara ya na etu esi ewere ya
Njirimara nke ụbọchị
Ihe oriri na-edozi ume
Ihe okike probiotics
Eke abụba ọkụ
Chọrọ ịchọpụta ihe mgbakwunye na-edozi ahụ?
Na ngalaba anyị na-edozi ahụ ị ga-ahụ ọtụtụ nri nwere ezigbo ihe ga-enyere gị aka idalata ma ọ bụ melite ahụike gị. You maara ha niile?
Hụ mmeju nri ndị na-edozi ahụ
Nyochaa ebe nrụọrụ weebụ anyị
Buru a ndu ike ọ ga-ekwe omume ma ọ bụrụhaala na anyị nwere ezigbo ndụmọdụ ma ọ bụ ụkpụrụ nduzi ga-eme ka o kwe omume. Maka nke a, na Nutridieta ị ga-ahụ usoro nke ngalaba zuru oke, itinye n'ọrụ ka ị na-elekọta ahụike gị ma na-achịkwa ibu gị. N’otu aka, ị nwere ike ịnụ ụtọ nri kachasị dị nchebe na nke ziri ezi na-ekwekọ na ndụ gị.
N'ezie, n'aka nke ọzọ, na weebụsaịtị anyị ị ga-ahụ ha niile ozi dị mkpa gbasara nri nke ahụ dị na tebụl anyị oge ụfọdụ, mana anyị amaghị nke ọma. Uru ya, uru ya na ihe ya ga-ekpuchi ọtụtụ ozi a. Na ha, anyị na-enyere gị aka ịkwadebe Ezi ntụziaka, n'ihi na iri nri dị mma agaghị abụ ihe na-agwụ ike.
Anyị na-ekwukwa ndụmọdụ ahụ ike tinyere ụfọdụ ọrịa, ka inwee ozi niile emelitere ma gakwuru ndị nwere obi abụọ na-ebilite n'uche anyị mgbe ụfọdụ. N’ezie, anyị anaghị echefu mmega ahụ kachasị ike, yana egwuregwu ndị a tụrụ aro na ngwaahịa ma ọ bụ mgbakwunye nke ga-enye ahụ gị ihe ọ chọrọ n’ezie, na-enwekarị ihe okike.
N'okpuru ị ga-ahụ ndepụta nke edemede niile anyị na-ekwu okwu na ya Nutridiet:
Echefula ozi ọhụrụ anyị bipụtara na blọgụ nri anyị.
Ihe nketa nke Iberia
Chọrọ ịhụ akwụkwọ ọhụrụ anyị na nri?
Echefula ihe ndị ọhụrụ na blog nri anyị